Fitaovana kognitifa: Fianarana misokatra ho an'ny lozisialy SW | Avy amin'ny Linux
Fitaovana Cognitive: Microsoft Open Source Deep Learning SW
Microsoft's Cognitive Toolkit (antsoina hoe CNTK taloha) dia a fitaovana fianarana lalina (Machine Learning) de «Código Abierto» miaraka amin'ny hery anaty lehibe. Maimaimpoana koa izy io, mora ampiasaina ary manana kalitaon'ny kilasy varotra izay mamela ny famoronana algorithma fianarana lalina afaka mianatra amin'ny ambaratonga akaiky ny an'ny sain'ny olombelona.
Microsoft, mpamorona azy, dia miantoka fa ity fitaovana loharano misokatra ity dia manome scaling tsy mampaninona, hafainganam-pandeha tsara sy hafainganam-pandeha ary mifanentana amin'ireo fiteny sy algorithma efa be mpampiasa ankehitriny.
Ary izany, vokatr'izany, dia mahay mampiofana sy manombatombana ny algorithma fianarana lalina haingana kokoa noho ny fitaovana hafa mitovy amin'izany. Raha izy kosa dia afaka mizana tsara amin'ny tontolo manodidina azy (CPU, GPU, na Cluster of Equipment aza) nefa tsy very tadidy.
ny namboarina tamin'ny algorithma sy mpamaky famokarana hiasa am-pahatokisana miaraka amin'ireo angon-drakitra marobe. Toy izany koa no ampiharina amin'ny vokatra toy ny Skype, Cortana, Bing ary Xbox. Ary ampiasaina ihany koa izy io ankehitriny amin'ny indostrian'ny teknolojia lehibe hampiroborobo «Inteligencia Artificial (IA)» kilasy ara-barotra. Ambonin'ny zavatra rehetra, ho azy fanampiana an'i C ++ sy Python, izay ahafahanao manamboatra saika ny algorithm fampiofanana efa misy na anao manokana.
1 Fitaovana kognitifa: inona izany ary inona ireo fiasa ao aminy?
Fitaovana kognitifa: Inona izany ary inona ny mampiavaka azy?
Fitaovana misokatra ho an'ny fahalalana lalina ity.
Izy io dia vokatra novokarin'i Microsoft izay ny kinova farany farany dia 2.7.
Lazalazao ny tambajotra neural ho toy ny andiana dingana computational amin'ny alàlan'ny graf alefa.
Io dia ahafahan'ny mpampiasa manamboatra sy manambatra karazana maodely malaza indrindra, toy ny: Deep Neural Networks, Convolutional and Recurrent.
Ampiharo ny fianaran-tsolika gradien stochastic amin'ny fanavahana automatique sy ny fampitoviana amin'ny GPU sy seriver maro.
Izy io dia azo ampidirina ho tranomboky ao amin'ny programa Python, C # na C ++, na ampiasaina ho fitaovana fianarana lalina tsy miankina amin'ny alàlan'ny fiteny famaritana modely azy (BrainScript). Na ampiasao ny fampiasana tombam-bidy avy amin'ny programa noforonina niaraka tamin'ny Java.
Izy io dia mifanentana amin'ny Linux 64-bit na Windows 64-bit Operating Systems amin'ny alàlan'ny fonosana mimari-droa efa namboarina, na amin'ny alàlan'ny fanangonana azy ireo amin'ny alàlan'ny fisie loharano namboarina tamina GitHub.
Fanamarihana: Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Cognitive Toolkit dia azonao atao ny mitsidika ny azy ireo tranokala ofisialy ao amin'ny Microsoft na ny tranokalany ao amin'ny GitHub.
El «Intercambio de Redes Neuronales Abiertas (Open Neural Network Exchange - ONNX)» dia ekosistema misokatra izay mamela ny mpamorona ny «IA» safidio ny fitaovana mety rehefa mivoatra ny tetikasanao.
Y Cognitive Toolkit dia iray amin'ireo fitaovana fianarana lalina voalohany manohana ny endrika «ONNX». Format izay mpiara-novolavolain'i Microsoft ary tohanan'ny hafa maro. Amin'izay mba, «ONNX» mamela ny mpamorona hamindra modely eo anelanelan'ny rafitra toa Cognitive Toolkit, Caffe2, MXNet, ary PyTorch.
Farany, «ONNX» manome endrika loharano misokatra ho an'ny Modely an'ny «IA» ary mamaritra a maodely fanaovana computation extensibleary koa misy ny famaritana efa niasa anaty sy karazana data mahazatra. Ary mifantoka amin'ny fahaiza-manao ilaina fizotran'ny inferansa (isa).
Fanamarihana: Raha mila fanazavana fanampiny momba «ONNX» Azonao atao ny mitsidika ny tranonkala ofisialiny amin'ny rohy manaraka Sokafy ny fifanakalozana tambajotra neural.
Manantena izahay fa izany ianao "lahatsoratra kely nefa mahasoa" momba ity rindrambaiko mahaliana hafa ity «Código Abierto» do Microsoft Open Application Ecosystem antso «Cognitive Toolkit», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fitaovana kognitive: Open Source Deep Learning SW
Rehefa mampiasa ny Screen Print amin'ny Ubuntu ianao, tsy mandika ny fakana an-tsoratra intsony ve izany amin'ny clipboard? Azonao atao ny mamaha azy